Reward System_XH_Isicwangciso Sokwenza | PIVX
Zonke iindawo ze-blockchain ezinikezelwe ngokusemthethweni zinenkqubo ethile yokufumana abantu abanceda ukukhusela inethiwekhi yabo. Kwezinye iinkqubo ezifana neBitcoin, le mivuzo inikwa ‘kwiMiners’, iqela elikhethiweyo labantu abakhuselekileyo inethiwekhi yeBitcoin. Kwi-PIVX, nabani na abane-PIV banokukunceda ukukhusela umnxibelelwano kwaye banako ukufumana umvuzo kwimigudu yabo!
Njengamhlanje kukho amaqela amathathu ahlukeneyo awanceda bonke i-PIVX ngeendlela ezahlukeneyo kwaye bonke bafumana umvuzo wale mizamo.
Indlela yokufumana imivuzo
I-PIVX isebenza ngokusebenzisa Ubungqina bendlela yokukhusela isitebe esithetha ukuba ukuze uncede ukukhusela umnxibelelwano, kufuneka ubonise ukuba ubamba iPIV. Iinkqubo ezimbini zokuqala ngezansi ziindlela ezimbini ongasebenzisa i-PIV yakho ukuze ufumane inzala kwizinto osuke unayo. Ukuba awunayo i-PIV, kodwa ufuna ukufumana enye, indlela yesithathu ikuvumela ukuba ufumane ngokukunceda uluntu
Indlela 1 – Ukuqhuba iMasternode
Ukuqalisa iMasternode, efuna i-10 PIV.
(Qaphela: kufuna ezinye iindlela zobuchwepheshe)
Indlela 2 – Bamba iPIV yakho
Gcina i-PIVX yakho, engenakufuneka ubuncinci, kodwa ifuna ukuba ugcine i-wallet yakho isebenza.
Indlela 3 – Ukunceda
Kukho namathuba atholakala ngawo onke amaxesha ukuze ancedise ngeeprojekthi zengingqi ezixhaswa yi-PIVX. Ukuba unceda ezi projekthi kunye, ufanelekile ukufumana i-PIV ngexesha lakho nomsebenzi. La mathuba afaka ukuphuhliswa, ukuthengiswa, ukuxhaswa kwabathengi, kunye nokunye. Ukuba ungathanda ukukunceda nale mi sebenzi, nceda ufikelele kwiSlack okanye kwiiForam!
Ingakanani i-PIV yenziwe, kwaye ikwabiwa njani?
Yonke imizuzwana engama-60, ama-PIV ama-5 ayadalwa (ngamanye amaxesha abizwa ngokuba ngumtshini). Ezi zi-PIV zizenzeke ngokuzenzekelayo zibe ziqhathu. I-10% echanekileyo (0.5 PIV) iya echibini esetyenziselwa ukuxhasa ukukhula kwe-PIVX. (Indlela 3) AmaMasternodes avotela kwiiprojekthi ezi-10% ekufuneka zichithwe ngazo kwaye amalungu omphakathi abenza le projekthi athi i-PIV. Olunye u-90% (4.5 PIV) ulwahlula phakathi kweMasternodes kunye ne-Staker. (Izindlela 1 no-2) Ukwahlula phakathi kweMasternodes kunye ne-Staker kusekelwe “kwi-Algorithm ye-Seesaw.” Le algorithm ishintsha rhoqo inani leembuyekezo eziya kumaqela amabini ngokusekelwe kwinani labaSebenzi kunye neMasternode ngexesha elithile. I-Seesaw Algorithm yangoku ivuselela ibhalansi ukwenzela ukuba ama-Masternodes enze okungaphezulu kwamaStaker ukuba afake iindleko zokusebenza eziphezulu. Ukuze ufunde kabanzi malunga ne-Seesaw Algorithm, nqakraza apha.
Ingakanani i-PIV endimele ndiyilindele ukuba iyenze?
Inkqubo yomvuzo ngokuyila ininzi yokwenza okungahleliwe. Oku kwenziwa ngenjongo yokukhusela, kodwa kunokukwenza ukubala kunzima. Ngaloo nto yathi, iMasternode idinga i-10 ye-PIV, kwaye ngamnye uMasternode kufuneka athole umvuzo malunga neentsuku ezingama-1-2. Ukugxinwa, umgaqo oqhelekileyo wesohlwayo kukuba kuyo yonke i-PIV i-1000 (i-PIV yenyani), unokulindela umvuzo wokuba umvuzo emva kweentsuku ezingama-30, kodwa khumbula ukuba le nkqubo yenzelwe ngokupheleleyo! Unokuhamba iintsuku eziyi-15 ngaphandle komvuzo uze ufumane ezimbini ngosuku olunye. Kunokwenzeka!
Ngokusekelwe koqikelelo lwangoMeyi 2017 ukuya ku-Apreli 2018, ukubuyela kwi-staking yearly average to 4.8%. Ukuze uphumele umvuzo kumhla ujonge i-PIVX Imivuzo yeBalawuli
Ufuna ulwazi olungakumbi?
Nceda uqhagamshelane nomphakathi wethu okhulayo we-Slack uze ubuze nayiphi na umbuzo ongathanda! Fumana isimemo sakho kwi- PIVX.Slack.com.